Izindaba - Amathiphu ezempilo ekwindla
Amathiphu ezempilo ekwindla
Ekwindla yisikhathi esihle sokuvuna. Futhi yisikhathi sezifo esiphezulu sezifo. Abaningi izifo zivame ukubuyela emuva ekwindla. Ngokusho kwezazi zokusebenza kwengqondo, ngenxa yethonyayesimo sezulu nezinye izinto, izehlakalo zokudangala nezinye izifo zengqondo ku ekwindla kuye kwanda kakhulu. Ngakho-ke, ekwindla kufanele sinake kulawulwa yaboimizwa, gcina isimo sethemba kukho konke, xhumana nabangane, thatha okuningi ukuhamba, noma ukubamba iqhaza ekuphumeni ekwindla nakho kuyisinqumo esihle. Futhi ekwindla, isimo sezuluyomile futhi abantu bayakwazi ukuphelelwa umoya.Ngakho ekwindla, kufanele sihlakulele okuhle umkhuba wokusheshe ulale futhi uvuke kusenesikhathi.
Ekwindla futhi yisikhathi sokuvuna zonke izinhlobo zezithelo.Kulula ukudla izithelo eziningi kakhulu ukudala ukungaphatheki kahle kwamathumbu. Ngaphezu kwalokho, ngemuva kokungena ekwindla, umzimbaumsebenzi wokugaya ukudla waqala ukuncipha.Ngakho uma unganaki, kulula ukuba nakho izifo zamathumbu. Ngakho-ke, ekwindla kufanele inake ukuvinjelwa kweizifo zamathumbu, udle izithelo ukunaka inhlanzeko, wenqabe ukudla okubandayo futhi iziphuzo ezibandayo, okuluhlaza nokuvuthiwe kufanele kuhlukaniswe. Amanye ama-pasta, isobho lelayisi nokunye ukudla kungakwenzaisetshenziselwe ukondla isisu.
Ekwindla, kufanele sinake ukufudumala futhi gcwalisa amanzi ngezikhathi ezijwayelekile.Ukubamba iqhaza kweminye imisebenzi yangaphandle ukuze isiza ukuthuthukisa ukumelana nomzimba futhi uziqhelanise nokubanda.Nokho, kufanele kuqashelwe ukuthi ku ekwindla lapho izinga lokushisa liphansi, imisipha nemisipha yabantu kuzokwenza reflexively kubangele ukwanda kwe-vasoconstriction kanye ne-viscidity, ukwehla kwe- ububanzi bokunyakaza kwamajoyini nokuncipha kokuthambeka kwemisipha. Uma singenjalo ukufudumala ngaphambi kokuzivocavoca, kuzodala ukulimala kwe-ligament ehlangene, ukucindezela kwemisipha nokunye. Ochwepheshe basikisela ukuthi inani lokuzivocavoca akufanele libe likhulu kakhulu. Ngakho-ke kufanele sikhethe okunyeimisebenzi elula futhi emnene.